R/wasaaraha: “Dowladda waxa ay qaadaysaa mas’uuliyadda taabo gelinta shirka dib-u-heshiisiinta Dhuusamareeb” – Radio Muqdisho
R/wasaaraha: “Dowladda waxa ay qaadaysaa mas’uuliyadda taabo gelinta shirka dib-u-heshiisiinta Dhuusamareeb”
Ra’iisul wasaaraha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa uu balan qaaday in Dowladda ay bixineyso qarashka ku baxaya Shirarka dib-u-heshiisiinta Goboladaas ka socda, isagoo dhanka kalena xalay kulamo la qaatay Maamulka iyo siyaasiyiinta Dhuusamareeeb ku sugan.
Guddoomiyaha Gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo oo ka hadlayay kulanka ayaa sheegay in degmooyinka Ceeldheer iyo Galhareeri inaysan xor ahayn oo ay ka maqantay gacanta dowladda, waxaana uu xusay in gobolka ay ka dhaceen faldambiyeedyo ay gacan ka geysteen maleeshiyada Kooxda Shabaab.
“Mudane Ra’iisul wasaare waxaa noo qorsheysan in deegaannada ka harsan gobolka aan dib ula wareegno oo aan ka sifeyna cadowga Ummadda ee Shabaab, waxaana rabnaa in arrintaasi gacan nalagu siiyo” ayuu yiri Cirfo.
Wasiirka Arrimaha gudaha Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa ayaa sheegay in shirka dib-u-heshiisiinta uu gacan ka geysan doono dhismaha Maamulka Gobollada Mudug iyo Galgaduud.
“Dad wada heshiiyay ayaa nidaab qabsada, marka waxaan bulshada ka codsanayaa inay xoojiyaan dadaalka ku aadan sidii loo xalin lahaa, isla markaana dib-u-heshiisiin dhab ah loo dhex dhigi lahaa bulshada degta Gobollada Mudug iyo Galgaduud” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha gudaha.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda ay taabo gelineyso dhameystirka shirka dib-u-heshiisiinta, isagoo intii soo agaasinta uga Mahadceliyay qabsoomidda shirka.
“Waxaan rabaa in aan idinkaga Mahadceliyo sidii aad noo soo dhaweyseen, dowladda waxa ay mas’uuliyad qaadeysa taabo gelinta shirka, waxaan bogaadinayaa duubabka iyo intii ka qeyb qaadatay qabsoomidda shirka” ayuu yiri Ra’iisul wasaaraha.
Dhaqaale loo urruuriyay dhismaha waddo isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo